Akukho mfundi okufanele asalele ezifundweni ngenxa Coronavirus – Sivubela intuthuko Newspaper
uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Kwazi Mshengu uthe abazali kufanele benze isiqiniseko sokuthi abafundi benza umsebenzi wabo wesikole ngokusebenzisa uhlelo lweVodacom e-schools, KZN Funda nezinhlelo zoMnyango wezeMfundo.
“Sinezinhlelo zokufundisa abafundi emsakazweni. Esikucela kakhulu wukuthi abazali basilekelele. Benze isiqiniseko sokuthi izingane zisemakhaya ngesikhathi sezifundo ezisakazwa emisakazweni ehlukene. Sikhipha isitatimende njalo ngosuku ezinkundleni zokuxhumana ukwazisa abantu ukuthi namhlanje kufundwa ziphi izifundo,” kusho uMshengu.
Uthe kumahhala ukungena kwiVodacom e-schools okusho ukuthi abafundi bathola lonke ulwazi abaludingayo ngaphandle kokumosheka kwe-data yabo noma eyabazali uma bengenawo amaselula.
“Zonke izifundo zethu kusukela kwezakwaGrade R kuya kwaGrade 12 sizifakile kwiKZN Funda portal. Siyacela abazali basilekelele noma ngabe abafundi bakwaGrade 12 bayafunda noma besemaholidini. Namanje sithi bonke abafundi akufanele basalele ezifundweni zabo abasebenzise ama-app ethu ukuqhuba izifundo zabo. Esikucela kakhulu wukuthi abazali basilekelele kakhulu bafundise izingane njengoba zisemakhaya zonke izifundo zikhona kuma-portal ethu,” kusho uMshengu.
UQHUBE KAHLE UMKHANKASO WOKUQWASHISA OGOGO EMZUMBE